DAAWO:- Abwaan Shube oo si dadban u dhaleeceeyay Gaas iyo Xildhibaanadii lasoo shaqeeyay.
November 18, 2018 marqaan Puntland, Somalia, Wararka Maanta 0
Abwaan Cabdulqaadir Cabdi (Shube) oo kamid ah Hal abuurka somaliyeed kuwooda uGu caansan ayaa mar kale ka hadlay jahawareerka kajira Puntland iyo Diyaar garoowga Doorashad dhawaan la filayo in ay dhacdo.
Abwaan Shube ayaa u sheegay madax dhaqameedka Puntland in ay soo xulan xildhibaano tayo leh oo Puntland wax kabadala, waxaana hadalkaas uu jeediyay mar uu ka hadlayay kulan ka dhacay magaalada garoowe oo ay soo qaban qaabisay madasha runta iyo cadaadalada puntland loogana hadlay is badalka laga sugayo puntland in ay ka dhacdo.
Abwaanka oo waayihii dambe la sheegayay in uu ku kacsan madaxwayne Gaas ayaa kulanka ka sheegay in uu Fariin u dirayo Shaqsiyaadka ku fashilmay siyaasada Soomaliya kuwaas oo kuyiri ”Yeysan ku rafan ummada Soomaliyeed hana laga qabto”.
isagoo si hadlayay ayuu sheegay in ay jiraan Musharixiin badan oo is badal doon ah kuwaas oo lagu dhaliilayo dhaqaalaha ay haystaan laguna been abuuranayo oo la leeyahay ”Federaalka ayaa lacag soo siisay oo wadata”.
Hadaba halkaan hoose ka daawo Abwaan shube oo arimo badan ka hadlaya:-